Follow the Line 2D Deluxe 23.7 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 23.7 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Follow the Line 2D Deluxe
Follow the Line 2D Deluxe ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင့်ရဲ့လိမ္မာသောလက်ချောင်းကိုဆွဲပါ, အကျပန်းထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဝင်္မှတဆင့်အဆောတလျင်, အစာရှောင်ခြင်း run နှင့်ကခုန်လိုင်းအတိုင်းလိုက်နာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ နယ်စပ်ထိမခိုက်နှင့်လှိမ့အတားအဆီးသတိထားဖြစ်မနေပါနဲ့။ အဖြစ်ဝေးသင်လုပ်နိုင်သည်အဖြစ် Slither, အတားအဆီးကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်အသစ်သောစိန်ခေါ်မှုများကိုသော့ဖွင်။ မိုဃ်းကောင်းကင်၌လမ်းကြောင်း Follow နှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ကြိုးစား, သင့်လိမ္မာသောလက်ချောင်းများနှင့်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ရန်နှင့်သင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးပိုမြန် run အသစ်တစ်ခုစံချိန်သတ်မှတ်ထားနိုင်သည့်တွေ့မြင်!
ဒီဂိမ်းထဲမှာအကောင်းဖြစ်စေရန်, သင်တစ်ဦးလိမ္မာသောလက်ချောင်းကိုမလိုအပ်ပေမယ့်လည်းအမြန်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်တိကျစွာမသာ။ မိမိအလက်ချောင်းရွေ့လျားအတားအဆီးများကသတ်မှီတိုင်အောင်လိုင်းပေါ်ဖြည်းဖြည်းချင်း slithers တစ် trolls ဖြစ်မနေပါနဲ့! မကြာခဏသင်အချိန်အပြေးအလွှားအတူလှိမ့အတားအဆီးန်းကျင်ကခုန်ဖို့ရှိသည်မည်ဖြစ်ပြီးလိုင်းပျောက် slither ။ ကျဉ်းမြောင်းကျမ်းပိုဒ်မှတဆင့်မြွေကဲ့သို့အရွှေ့နှင့်အနိုင်ရအဖြစ်အစာရှောင်သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်ကောင်းကင်ပြာထဲမှာရွေ့လျားအတားအဆီးအကြား slither ။ အသစ်ကအဆင့်ဆင့်သော့ဖွင့်, ပြည့်စုံနေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ဒင်္ဂါးပြားများနှင့်ကျောက်မျက်ကိုစုဆောင်းပါ။
ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှုများကိုဦးဆောင်သူကစားသည့်ပေါင်းစည်း google ဂိမ်းမှတဆင့်ကမ္ဘာကိုသင်၏မြင့်ရမှတ်ပြပါ။
ဘောလုံးကိုအပေါ်ယခုနှိပ်ပါပြိုင်ပွဲကိုစတင်ပါ။ သင့်ရဲ့လက်မနှင့်အတူလိုင်း Follow နှငျ့သငျဖွစျစနေိုဘယျသို့သူရဲကောင်းလူတိုင်းကိုပြသ!
NEW! RPG element တွေကိုပေါင်းထည့်ပြီးပါပြီ! အပြီးအစီး Quests နှင့်မစ်ရှင်များတို့နှင့်ကြီးသောဆုလာဘ်ရ!
* ဂိမ်းခေတ္တရပ်တန့်ပြီးရန်သင့်လက်ချောင်းကိုဖိအားပေးရန်ပေမယ့်ရွေ့လျားနဂါးအတားအဆီးသတိထားဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ MMM အရသာရှိတဲ့ဟုဆိုလိမ့်မည်နှင့်နံနက်စာအဘို့သင့်လက်ချောင်းဖြတ်မည်
* Collection ဒင်္ဂါးပြားများနှင့်ကျောက်မျက်သင့်ရဲ့အစွမ်းအ upgrade နှငျ့သငျသေဆုံးတဲ့အခါမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ရန်
တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဝင်္ run ဖို့ * နေ့တိုင်းအချိန်
တစ်ဦးတည်းသာလိမ္မာလက်ညှိုးနှင့် * လွယ်ကူဂိမ်း
မည်သည့်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားပေါ် * ဂရိတ်ဂရပ်ဖစ် & ဆိုးကျိုးများ
* Dynamic အတားအဆီး
* Amazing သံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဂီတ
သော့ဖွင့်အသစ်အဆင့်ဆင့်၏ * အများကြီး
* အမှတ်သင်ပုန်းဟာ Google Play ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှုများကျင်း
* Facebook မှာပေါင်းစည်းမှု (သင်ဘယ်လောက်ကောင်းသော Facebook ပေါ်မှာကြွား)
* Wings ပါဝါတက် - ယခုသင်သည်လည်းအချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလများအတွက်လိုင်းထွက်ခွာနိုင်
* ခရုပါဝါတက် - လာမယ့်အရှိန်မတိုင်မီအချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလတစ်ချိုးယူပြီး slither နှေး
* ရမှတ်မြှောက်ကိန်းပါဝါဖွင့် - အချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလအဘို့သင့်ရမှတ်ဝင်ငွေနှစ်ဆ
* Shield ကိုပါဝါဖွင့် - အချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလများအတွက်ရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများထံမှသင်တို့ကာကွယ်ပေးသည်
* ဒင်္ဂါးပြားကိုစုဆောင်းနှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးပါဝါတက် upgrade
ပို. ပင်အံ့သြဖွယ်များရရှိရန် * အပြီးအစီးနေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုများ
* RPG element တွေကို: ပြီးပြည့်စုံသော Quest များနှင့်မစ်ရှင်နှင့် get အပိုကြီးမြတ်ဆုလာဘ်
Follow the Line 2D Deluxe အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Follow the Line 2D Deluxe အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Follow the Line 2D Deluxe အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
catappult စတိုး 30.86k 26.56M
Follow the Line 2D Deluxe ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Follow the Line 2D Deluxe အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 23.7
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.nenoff.com/ftl-privacy-policy
လက်မှတ် SHA1: 30:5F:9E:B4:99:6F:E7:B5:5C:BF:9A:12:C3:07:3C:53:89:D4:97:1E
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Matey Nenoff
အဖွဲ့အစည်း (O): Alstore UG (haftungsbeschraenkt)
နယ်မြေ (L): Stuttgart
Follow the Line 2D Deluxe APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ